nepaldoor.com: सेनाले खोल्यो काठमाडौं–तराई फास्टट्रयाक
सेनाले खोल्यो काठमाडौं–तराई फास्टट्रयाक
काठमाडौँ । नेपाल सरकारले घोषणा गरेका १७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये एक नम्बरमा रहेको काठमाडौँ–तराई–मधेस दू्रतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) को प्रारम्भिक ट्र्याक खोलिएको छ । सरकारले दू्रतमार्गको ट्र्याक खोल्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई २०६६ सालमा दिएको थियो । छयहत्तर किलोमिटर लामो दू्रतमार्ग काठमाडौँ–ललितपुर–मकवानपुर हँुदै बाराको निजगढमा पुगेर पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा जोडिनेछ । दायाँ बायाँ ५०÷५० मिटर चौडाको दू्रतमार्ग चार लेनको हुनेछ ।
आगामी पुस महिनादेखि निर्माण कार्य प्रारम्भ भई पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको उक्त राजमार्गको कुल निर्माण लागत रु ७६ अर्ब लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । उक्त दू्रतमार्गमा साना ठूला गरी ९६ वटा पुल निर्माण गरिनेछन् । सो दू्रतमार्गमा निर्माण हुने सबै पुलको लम्बाइ मात्र जोड्दा पनि ०९.६ किमीको हुनेछ ।
यस्तै मकवानपुरको ठिङ्गनमा १.६ किलोमिटर लामो सुरुङसमेत निर्माण गरिनेछ । निजी साझेदारीको अवधारणाअनुरूप सञ्चालन हुने दू्रतमार्ग निर्माणका लागि सरकारले पनि केही रकम व्यहोर्नेछ । उक्त मार्ग निर्माणका लागि सरकारले बोलपत्र आह्वान गरेकामा तीन वटा कम्पनीले त्यसमा मन्जुरी देखाइसकेको बताइएको छ । ती प्रस्ताव छनोटसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गरेर आगामी मङसिर÷पुसदेखि निर्माण कार्य थाल्ने गरी सरकारले कार्ययोजना बनाइरहेको छ ।
दू्रतमार्गको निर्माण कार्य पूरा भएपछि तराईबाट राजधानी आउन दिनभर खर्चिनुपर्ने दूरी र समय घटेर डेढ घण्टामा सीमित हुनेछ । दू्रतमार्गको निर्माणले राजधानी एवम् पूर्वी तराईका साथै समग्र मुलुकको विकासमा कायापलट आउने दाबी गरिएको छ । दू्रतमार्ग निर्माणपछि राजधानीलगायतका क्षेत्रमा ल्याइने पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानीमा मात्र खर्च हँुदै आएको रकममा वार्षिक रु १० अर्ब बचत हुने बताइएको छ ।
प्रारम्भमा ट्र्याक खोल्ने क्रममा रेखाङ्कन गरिएको क्षेत्रमा परेका रुख कटानका लागि थुप्रै पक्षसँग समन्वय गर्नुपर्ने र मुआब्जा वितरणसम्बन्धी विषयले केही समस्या सिर्जना गरिदिएपनि राजनीतिक दलको सहयोग र समर्थन लिएर नेपाली सेनाले त्यसलाई पार लगाएको थियो । त्यसैको परिणामस्वरूप सरकारले सङ्गठनलाई ठूलो विश्वासका साथ दू्रतमार्गको (सर्भिस ट्र्याक) खोल्न दिएको जिम्मेवारीलाई सेनाले सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ ।
नेपाली सेनाले मुलुकका विभिन्न भागका नौ वटा सडकको ट्र्याक खोलेर सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ भने तीन वटा सडकको काम पुरा गरी हस्तान्तरणको चरणमा रहेको जनाएको छ । फास्ट ट्र्याकसहित दुई वटा सडकको ट्र्याक खोल्ने काम सेनाले गरिरहेको छ । गुल्मीको रुद्रवेणीदेखि हर्मीचौरसम्मको अक्कर क्षेत्रको सडक निर्माणको कामसमेत नेपाली सेनाले पाएको छ ।
सेनाले निर्माण गरेका सडकहरू व्यवस्थित, दिगो र कम खर्चमा छिटो निर्माण हुने भएकाले पछिल्लो समयमा सरकारले सेनालाई महत्वपूर्ण सडकहरूको निर्माणको जिम्मा दिँदैआएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ को बजेट वक्तव्यमा भौतिक योजना मन्त्रीको संयोजकत्वमा दू्तमार्ग निर्माणका लागि ट्र्याक खोल्न सात सदस्यीय सुझाव समिति गठन गरिएको थियो । समितिको प्रतिवेदनअनुसार अत्यन्त अप्ठेरो र असजिलो ठाउँमा ७.५ र अन्य ठाउँमा १२ मिटर चौडा रहेको ट्र्याक खोल्न नेपाली सेनाले जिम्मेवारी पाएको हो । विसं २०६६ कातिक २३ गते शिलान्यास गरिएको सो दू्रतमार्ग निर्माणको प्रगतिबारे दर्जनाँै पटक उच्चस्तरीय टोलीले स्थलगत निरीक्षण गरी आवश्यक जानकारी लिएको थियो । सेनाले दू्रतमार्गको ट्र्याक खोल्न दुई जना प्रमुख सेनानीको नेतृत्वमा करिब तीन सयको सङ्ख्यामा सैनिक जनशक्ति खटाएको छ ।
पछिल्लो पटक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव तुलसीप्रसाद सिटौला नेतृत्वको टोलीले खोलिएको ट्र्याकको वस्तुस्थितिबारे जानकारी लिँदै बाराको निजगढमा बन्ने अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको पूर्वाधारको एउटा कडीका रूपमा ट्र्याक निर्माण पूरा भएको र यसले अब दुबै काम सम्पन्न गर्न सजिलो तुल्याउनुका साथै मार्ग निर्माण हुने सुनिश्चितता प्रदान गरेको प्रतिक्रिया दिएको छ ।
ट्र्याक खोल्ने क्रममा सडकमा परेको जग्गाको मुआब्जाका लागि सरकारले हालसम्म रु ९६ करोड निकासा गरेकामा रु ४५ करोड वितरण भइसकेको छ । ललितपुरको खोकनाको सात किलोमिटर क्षेत्रमा मुआब्जा विवादका कारण पहिले रेखाङ्कन गरिएभन्दा फरक ठाउँ बाग्मती किनारबाट बाटो लगिने भएको छ । सरकारले नेपाली सेनालाई ट्र्याक खोल्ने प्रयोजनका लागि हालसम्म रु ८२ करोड उपलब्ध गराइसकेको छ । ट्र्याक खोल्ने कामसँगै दू्रतमार्ग निर्माणको कामले पहिलो चरण पार गरेको छ ।
ट्र्याक खोल्ने क्रममा बाटोमा परेका रुख कटान गर्नु परेकाले सोको सोधभर्नास्वरूप नेपाली सेनाद्वारा त्यस क्षेत्रमा करिब दुई लाख ५० हजार विरुवा रोपिएका छन् । ट्र्याक खोलिएपनि परियोजना निर्माणबाहेक उक्त मार्गमा तत्काल सार्वजनिक सवारी साधनलाई खुल्ला भने नगरिने बुझिएको छ । अत्यन्त जटिल भू–बनोट र कठिनाइ रहँदारहँदै ट्र्याक खोल्ने काम पूरा गर्न पाएकामा सिङ्गो सङ्गठन गौरवान्वित भएको बताउँदै महासेनानी उद्धव विष्टले भन्नुभयो – “आउँदो वैशाख महिनाको अन्त्यसम्ममा सो मार्ग सरकारलाई हस्तान्तरण गरिनेछ ।”
ट्र्याक खोलिएसँगै द्रूतमार्ग आसपासका जनताले बाँदर लड्ने भीरमा समेत यति चाँडो गाडी चलेकामा चकित हुँदै बाँकी काम पनि छिटो पूरा गर्नसकिए मुलुकको विकासका लागि दू्रतमार्ग चमत्कारी साबित हुने प्रतिक्रिया दिएका छन् । रासस, चैत २९
प्रतिक्रिया, टिप्पणि वा सुझाबका लागि
इमेल गर्नुस्- npdoor@gmail.com
जुनियरलाई बढुवा गर्ने उपाय खोज्दै आईजीपी राना
१४४४ जना पूर्व लडाकु- सिपाहीदेखि महासेनानीसम्म (न...
आगलागी मौसममा दमकल अभाव, देशभर जम्मा ४६ दमकल
१० हजार प्रहरी थप्न अर्थ मन्त्रालय बाधक
प्रहरीले मलाई डन बनायो
यही हो नेपालको विदेश नीति (प्रचण्ड सम्बोधनको पूर्...
२०६९ मा खस्केको अन्तराष्ट्रिय छवि
एउटा अमिलो दशक
प्रचण्डलाई बेइजिङ र दिल्लीको सन्देश
कोरीयाली प्रायद्धिपको लडाई र राष्ट्रियता
उच्च जोखिममा सुनचाँदी व्यवसाय
नेपाली राजनीतिका गुमनाम संस्मरण (पुष्पलाल/बिपी सम्...
लालदरबारहरूको बन्दीगृहभित्र लोकतन्त्र
त्रिवेणीधाममा सकियो कांग्रेसको महासमिति वैठक (१६ ब...
महान् राष्ट्रनिर्मातासँग धुन्धुकारीको तुलना ?
नेपाली राजनीतिका अप्रिय सम्भावना
सगरमाथा चढ्दै छन् नेपाल–भारत सैन्य टोली (आरोही सैन...
किन बढ्दैछ सवारी दुर्घटना ? कसले लिने जिम्मेबारी ?
पाकिस्तानी सैनिक टोलि काठमाडौंमा (फोटो फिचरसहित)
नेकपा मसालको प्रस्ताव-सरकारको विरोध, निर्वाचन सुनि...
रेग्मी भन्छन्–नयाँ निर्वाचन २०७० मंसिरभित्र (मन्...
गाईसँग छोरी साट्ने मुलुकमा के गर्दैछ सेना ?
देशभर आगो निभाउँदै सशस्त्र प्रहरी टोली
खुल्यो चन्द्रशमशेरको रहस्यमय ढुकुटी
दक्षिण सुडानमा नेपाली सेना
रेग्मीलाई युरोपेली राजदूतले के के भने ?
एमाओवादीले अझै बुझाएनन् हतियार
विदेशिने बढे, रेमिट्यान्स घट्यो
काठमाडौंमा मैले के के गरें ?
किन आए जिमि कार्टर ? किन गले कांग्रेस/एमाले ?
एमाओवादीमा भद्रगोल, रायमाझीले मुद्दा मिलाउने